मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति, डा केसीले आज अनशन तोड्दै (सहमतिकाे पूर्णपाठसहित) « Bagmati Online
काठमाडौं, २५ असाेज । अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति भएको छ । यससँगै डा केसीले आज (आइतबार) अनशन ताेड्नुहुने भएकाे छ । सहमतिअनुसार २८ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर केसीले आज बिहान साढे ९ बजे अनशन तोड्दै हुनुहुन्छ । शनिबार सरकारी वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेर डा केसीसँगै ठाेस वार्ता गरेपछि सहमति जुटेको बताइएकाे छ । यसअघि बिहीबार र शुक्रबारका वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएका थिए । सरकारले डा केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार तीन सदस्यीय टाेली गठन गरेकाे थियाे भने डाक्टर केसी पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरेकाे थियाे ।
२८ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. केसी र सरकारी पक्षबीच शनिबार मध्यरातमा तेस्राेपटककाे वार्तामार्फत सहमति जुटेकाे हाे । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डा.केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे छ । सहमतिमा उल्लेख भएको बुँदाहरुको कार्यान्वयन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुले गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।